एनिभर्सरीमा श्रीमानले श्रीमतीलाई उपहार दिए चन्द्रमामा तीन एकड जग्गा — Sanchar Kendra
५संसद भवन बाहिर शक्तिशाली ब’म वि’स्फोट, ३ जनाको मृत्यु, थप बिबरणसहित
६प्रधानमन्त्रीद्वारा एकाएक राजीनामाको घोषणा
एनिभर्सरीमा श्रीमानले श्रीमतीलाई उपहार दिए चन्द्रमामा तीन एकड जग्गा
काठमाडौं । राजस्थानका अजमेर जिल्लाका व्यापारी धर्मेन्द्र अनिजा आज भोली चर्चामा छन् । उनले श्रीमतिको चन्द्रमामा जमिन किन्ने सपना साकार गरेका छन् ।
उनले २४ डिसेम्बरमा आफ्नो आठौँ बैवाहिक एनिभर्सरीमा श्रीमतीलाई चन्द्रमाको तीन एकड जमिन किनेर उनले उपहार दिएका हुन् । उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने – मैले अघिल्लो वर्ष नै अब आउँने एनिभर्सरीमा श्रीमतीलाई चन्द्रमामा जमिन किनेर उपहार दिने सोच बनाएको थिएँ ।
यो सपना पुरा गर्न धेरै सजिलो थिएन । लाखौँ प्रयासपछि सपना साकार भएको हो । उनले श्रीमति सपना अजिना भन्छिन्–उपहारमा चन्द्रमाको जमिन पाएर म निकै खुसी भएको छु । सायद संसारकै भाग्यमानी महिला म नै हुँ । खुसीको कारण रुन मन लागेको छ ।
श्रीमानको गलामा फित्ता बा‌धेर श्रीमतीले घुमाइन्, ट्रोल भएपछि दिइन् यस्तो स्पष्टिकरण, भिडियोसहित
भाग्यमा छ भने भगवानले २० करोडले हान्छन्, टिनको छानो फुटाएर घरभित्र आउँछ धन
रोचक तथ्य: खरायोलाई पनि डिप्रेसन, तर कसरी ?
प्रहरीको घरमा चोरी गर्न पसेका चोर घरधनीकी छोरीको कोठामा गएर…….
कसैले थाहा नपाएका ऐश्वर्या राईका ७ यस्ता रहस्य, थाहा पाएर तपाई आश्चर्य पर्नुहुनेछ